जुनसुकै बीमा कम्पनीकाे सेयर छ ? छ भने ठूलाे खुसीकाे खबर छ, मालामाल. – Facebook Khabar
सकारात्मक माहाेल बनारहेकाे सेयर बजार अब कता जान्छ ? यसाे भन्छन् अनुभवी जानकार
दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नेमा कामना सेवा पहिलो, कस्तो छ वित्तीय अवस्था?
जुनसुकै बीमा कम्पनीकाे सेयर छ ? छ भने ठूलाे खुसीकाे खबर छ, मालामाल.
facebook - January 14, 2022
बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकायले नगद लाभांशमा रोक लगाएपछि सूचिकृत बीमा कम्पनीहरूले बोनस शेयर दिने भएका छन्। बीमा समितिले कोरोना बीमा लेखको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै नगदमा रोक लगाएपछि कम्पनीहरूले बोनस दिन थालेका हुन्।
“बीमा समितिले हामीलाई नगद लाभांशमा रोक लगाएको छ। समितिले कोरोनाको दाबी भुक्तानी बाँकी भन्दै नगद नदिन भनेपछि हामीले बोनस शेयर नै दिने निर्णय गर्दै छौ” एक बीमा कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्षले मेरो लगानीसँग भने।
उनका अनुसार सबै जसो बीमा कम्पनीहरूले बोनस शेयर नै दिने गरी कुरा अघि बढाएका छन्। कम्पनीहरू बीच भएको अनौपचारिक कुराकानीमा सबै जसो कम्पनीहरूले बोनस शेयर नै दिने विषयमा सहमत छन्।
उनीहरूले सहमति गर्नुमा सरकार प्रतिको रोष पनि हो। कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै दायित्व पूरा गर्दा समेत नगदमा रोक लगाएको विषयलाई लिएर कम्पनीहरू रुष्ट छन्।
कम्पनीहरूका अनुसार कोरोना दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै भुक्तानी गरिसकिएको छ। सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम मात्रै बाँकी छ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट दायित्व पुरा नगर्दा समग्र बीमा कम्पनीहरूकै छबिमा दाग लागेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने उल्टै कम्पनी, कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खालका गतिविधि हुन थालेको भन्दै उनीहरू सरकार र समितिसँग रिसाएका हुन्।
जसले गर्दा उनीहरूले नगद रोकेर बोनस दिने भनेका हुन्। यसो गर्दा शेयर धनी पनि खुसी हुने र अर्को तर्फ कम्पनी पनि मजबुत हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
बीमा कम्पनीहरूले बोनसमै जोड दिनुको अर्को कारण पनि रहेको ती सञ्चालकले बताए। खासगरी यति बेला समितिले समग्र व्यवसाय भन्दा पनि आफ्नै खुसीले नीति निर्माण गर्न थालेपछि उनीहरू समिति र सरकार प्रति नै सशङ्कित छन्।
“समितिले हरेक दिन जसो यसो गर उसो गर भन्ने निर्देशन दिइरहेको छ। कहिले विदेशमा पुनरबीमा गर्न नपाउने, कहिले नगदमा रोक, अभिकर्ताहरुको ऋणमा कडाइ जस्ता निर्देशन बीमा व्यवसायका लागि लाभदायक होइनन्।
भोलि को”रोना दाबी भुक्तानी नभएसम्म बोनस नै बाँड्न पाउँदैनौ भन्ने निर्देशन पनि नआउला भन्न सकिन्न। आफ्नै रकम हालेर कम्पनीको पूँजी बढाउँछौ भन्दा पनि रोक्दै आएको समितिले भोलि फाइदा पनि बाँड्न पाउँदैनौ भन्ने निर्देशन नदेला भन्न सकिन्न” ती सञ्चालकले भने।
बीमा कम्पनीहरूले बोनस नै दिने निर्णयले शेयरधनीलाई भने लाभ नै हुने छ। नेपालमा शेयर धनीहरूले नगदलाई भन्दा बोनस शेयर लाइनै प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
जसले गर्दा पनि उनीहरुका लागि भने कम्पनीहरूले गरेका निर्णयमा कुनै आपत्ति हुने छैन। शेयरधनीकै साथ पाएपछि कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुने छ।
समितिको रोक र बोनस नै प्राथमिकतामा पर्ने भएपछि सबै जसो कम्पनीले आउने दिनमा बोनस शेयर नै दिने छन्। यसअघि नगद दिने भनेका कम्पनीले पनि बोनस शेयर नै दिनु पर्ने छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा दुई कम्पनी बाहेकले लाभांश घोषणा गरेका छैनन्।
घोषणा गर्ने कम्पनीहरूमा प्रिमियम इन्स्योरेन्स र हिमालय जनरल इन्स्योरेन्सले मात्रै छन्। प्रिमियरले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७.५ प्रतिशत बोनस र ७.५ प्रतिशत नै नगद लाभांश गरी १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई बिहीबार मात्र परिमार्जन गरी सबै बाेनस लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ।
हिमालयन जनरलले ६.६५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.३५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। हिमालयनको हकमा उसले प्रस्ताव गरेकै लाभांश स्वीकृत हुने छ। समितिका अनुसार कर प्रयोजनको लागि लाभांश भने रोकिने छैन।
तर यता जीवन बीमा तर्फ भने गत वर्षको नाफाबाट कुनै कम्पनीहरूले लाभांश प्रस्ताव गरेका छैनन्। उनीहरूलाई पनि नगदमा रोक लगाउने निर्देशन बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएकाे छ । जसले गर्दा आउने दिनमा सबैजसो जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि बोनसमै जोड दिने छन्।
५ बैंकसहित २२ कम्पनीको साधारणसभा आज, कसले कति दिँदैछन् लाभांश ?
हरियाली आएकाे बजारमा मध्यभाेटीकाेशीदेखी राधी जलविद्युतसम्मका यी कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल